Izeluleko Eziyisikhombisa Zokwenza Amathayili Wendawo Yokugeza Ahlale Isikhathi Eside
Ikhaya / Blog / Izeluleko Eziyisikhombisa Zokwenza Amathayili Wendawo Yokugeza Ahlale Isikhathi Eside
2021 / 09 / 12 UkwahlukanisaBlog 850 0
Kungani amanye amathayili abantu exebuka emakhaya abo amasha kungakabi yisikhathi emva kokuba eselungisiwe?
Lokhu kuyiqiniso ikakhulukazi kumathayili okugeza, futhi kungenxa yokuthi awenzanga umsebenzi omuhle lapho ufaka amathayili.
Okulandelayo kukutshela izeluleko eziyisikhombisa zokuvimbela amathayili endlu yangasese ekuweni!
1, ukudonsa izinwele kwe-Baselayer
Emgqonyeni wethayela lokugezela ngaphambi, kufanele uqale wenze umsebenzi omuhle wokudonsa izinwele ezimpandeni zotshani. Lokhu kwenzelwa ukwandisa ukunamathela kodonga, ukuvimbela ukunamathiselwa kwethayela ngemuva kokuthi isimo singekho. Ungasithathi kancane lesi sinyathelo, lesi sinyathelo sidlala indima ebalulekile ekuvikeleni amathayili ukuthi angaveli.
2, amathayili eWall afakwe emanzini
Kubalulekile ukuthi wazi ukuthi isisekelo kufanele siniselwe ngokuphelele futhi sinomswakama ngaphambi kokuthayipha. Ngaphandle kwalokho, umswakama odakeni uzongeniswa ngokushesha isisekelo esomile namathayili bese uhlangana ngokushesha. Lokhu kuzothinta ukusondelana kwayo, kamuva, bese kuba lula ukuvela kuthayela ngaphandle kwesimo, ngakho-ke ukucwilisa amathayili odonga nokunisela okuyisisekelo kuyadingeka kakhulu.
3, Hlanza isisekelo
Uma kukhona ukhonkolo we-lime, upende we-emulsion, iphepha lodonga, nezinye izinto zokuhlobisa odongeni, noma ukungcola phansi, kufanele kuhlanzwe. Ngaphandle kwalokho, udaka lukasimende ngeke luhlangane kahle nesisekelo. Ngaphezu kwalokho, uma kunemifantu odongeni uqobo, idinga ukwelashwa ngaphambi kokuba kufakwe amathayili. Lokhu kungagwema ukuqhekeka kwesikhathi esizayo kube kukhulu okuholela ekutheni amathayili odonga aqhekeke noma awe esimweni.
4, Dweba imigqa
Ngaphambi kokuvula amathayili, udinga ukuthola umugqa omuhle omile kusengaphambili. Amathayili agandwe ngalokhu njengebhentshi azofana kuphela ngobude nangokubukeka okuqondile mpo. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa ngaphambi kodonga kudinga ukuqhamuka kuzungeze ulayini wokulawula ukuphakama. Popha out crosshairs emhlabathini ukwenza lula ukulawula usayizi wokwehlukanisa tile.
Okokuqala, umbala, ukuthungwa nobuso bethayela lamathayili kufanele kukhethwe ngokuqinile ngokuya ngezidingo zokwakhiwa kwemidwebo, bese ku-pre-paved ngokuya ngezidingo zemidwebo. Amaphutha osayizi, ombala nokuthungwa okungenzeka ku-pre-paving kufanele kulungiswe futhi kushintshaniswe kuze kutholakale imiphumela emihle kakhulu, bese ibekwa kahle ngokusho kwepavili ngokushelela.
Amathayili kufanele agandaywe ngodaka lukasimende oluqinile olungu-1: 3. Usayizi wensimbi kufanele ulawulwe cishe ngama-20mm. Ingemuva kwamathayili kufanele kube manzi ngaphambi kokuba kuvulwe, futhi uhlangothi lwangaphambili kufanele lomile. Beka amathayili kusimende wosimende njengoba kudingeka bese uthepha indawo yethayela ngesando senjoloba kuze kube yilapho isiminyene futhi siyisicaba. Ithayela master ekusetshenzisweni kosimende ngokujwayelekile lizofakwa ngokulinganayo, ukuvimbela ukuvela kokuqhuma kwethayela.
7, amalunga wokuxhuma
Ithayela livuleke amahora angama-24 ngemuva kokuxhunywa kokuhlanza. Ukuxhuma ngaphambi komthungo wethayela kufanele kusulwe kuhlanzeke ukungcola, bese kuxhunywa nge-caulk ekhethekile. Ngalezi zindlela ezingenhla eziyi-7, kuyasebenza ekwehliseni ukuvela kokuchitheka kwethayela, ngiyethemba uyakhumbula!
Edlule :: IHuida Sanitary Ware: Imali engenayo Engxenyeni Yokuqala Yonyaka Bekungama-Yuan ayizigidi eziyizinkulungwane eziyi-1.743, Ukukhuphuka kwama-32.38% Ngonyaka Ngonyaka Olandelayo: Ukukhula Kwe-371% VS 70% Yehla! Ngabe Umncintiswano Womakethe Wendawo Yonke Yangasese Usufinyelele Esigabeni “Esimhlophe Esishisayo”?